22Bet Ukubhalisa - Uyenza Kanjani I-Akhawunti Entsha Ye-22BET?
Kungani Bhalisa ku-22bet?
22Bet Bhalisa Nge-Social Network
22Bet Bhalisa Ukubheja nge-E-Mail
22Bet Bhalisa ngokubheja ngocingo
UMHLAHLANDLELA WE 2022
Izinyathelo Ezisheshayo Zokubhalisa ku-22Bet
Ukubhalisa, udinga ukuchofoza inkinobho ethi Bhalisa, egqanyiswa umbala wayo oluhlaza ogqamile phezulu, eduze nekhona elingakwesokudla.
Enye indlela isuka enkinobho enelebula efanayo – Bhalisa, ngezansi kwesiliphu sokubheja kwesokudla sekhasi.
Uma usuvule ikhasi lokubhalisa, kufanele ugcwalise zonke izinkambu ezidingekayo ukuze ukwazi ukuqedela inqubo yokubhalisa.
Ungakhetha phakathi kokubhalisa okugcwele nokubhaliswa ngezinkundla zokuxhumana noma ngezithunywa.
Nganoma yiluphi uhlobo lokubhalisa, kufanele uvumelane nemibandela yokusetshenziswa ekugcineni ukuze uqedele futhi udale i-akhawunti nge-22Bet.
Kungani Bhalisa nge-22Bet?
Ukubhalisa kuwebhusayithi kabhuki kuletha izinzuzo ezanele, esizogqamisa ngezansi. Imininingwane enemininingwane mayelana nezigaba ayikwazi ukubukwa abasebenzisi abangabhalisiwe.
Lapho ubhalisa nangemva kokwenza idiphozithi yokuqala, wonke amakhasimende amasha athola ibhonasi ye 100% enani lediphozithi. Ungakhetha phakathi kwebhonasi yesigaba Sezemidlalo, kanye nebhonasi yesigaba seCasino.
Isayithi linengxoxo ebukhoma, lapho ungakwazi ukubuza imibuzo kubasebenzi abasekelayo abasemsebenzini nganoma yisiphi isikhathi.
Isayithi lisekela izinguqulo ku 60 izilimi
Ikhasino ye-22Bet ineqoqo lemidlalo evela konjiniyela abaningi abahlukene, futhi uhlu luhlale lwengezwa kulo. Lokhu kuqinisekisa ukuhlukahluka kwabadlali.
Isayithi linikeza inguqulo yeselula elula, kanye nezinhlelo zokusebenza ezimbili zeselula – ye-iOS ne-Android.
22Bet Ukubhalisa – Umhlahlandlela onemininingwane
Ngemva kokuchofoza inkinobho ethi Bhalisa, inketho yokubhalisa egcwele iyavula. Kusukela kusixhumanisi phezulu kwesokudla ungakhetha ukubhalisa ngenethiwekhi yokuxhumana nomphakathi noma isithunywa, futhi kusukela kusixhumanisi esingaphezulu kwesokunxele ungabuyela kunketho yokubhalisa egcwele.
Dala I-akhawunti Ngenethiwekhi Yokuxhumana Nomphakathi noma Isilayezi
Inketho yokubhalisa emfushane ngokusebenzisa inethiwekhi yokuxhumana nomphakathi noma umlayezo. Kodwa lawa manethiwekhi ayaziwa futhi asetshenziswa ikakhulukazi eRussia. Kulezi, inethiwekhi ye-Google Plus isetshenziswa kabanzi ngaphandle kwaseRussia.
Lapha udinga kuphela ukukhetha uhlobo lwemali, izwe kanye nenethiwekhi yokuxhumana nabantu, bese uvumelana neMigomo Nemibandela kabhuki ukuze uqedele ukubhalisa.
Kodwa labo abakhetha le ndlela yokubhalisa kufanele bakhumbule ukuthi nabo kuyodingeka bagcwalise imininingwane yabo siqu kamuva, njengamakhasimende asebenzisa inketho egcwele.
22BET UKUBHALISA NE-SOCIAL NETWORK
Ukudala i-akhawunti ye-22Bet ngokubhaliswa okugcwele – Igxathu emvakwe gxathu
Efasiteleni eligcwele lokubhalisa elivulekayo ngemva kokuchofoza inkinobho yokubhalisa, kufanele ugcwalise idatha yakho yomuntu siqu kanje:
Qala ngokugcwalisa ikheli le-imeyili ozolisebenzisa ku-22Bet.
Okwesibili, gcwalisa igama lakho.
Okwesithathu, gcwalisa isibongo sakho.
Okwesine, gcwalisa iphasiwedi ozoyisebenzisa kusayithi.
Okwesihlanu, khetha izwe osebenzisa kulo isayithi. Isistimu ithola ukuthi udabuka kuliphi izwe. Imenyu yokudonsela phansi isetshenziselwa ukukhetha elinye izwe.
Okwesithupha, khetha uhlobo lwemali ozolisebenzisa. Uhlelo lukhetha ngokuzenzakalelayo endaweni yakho, kodwa ungakhetha olunye uhlobo lwemali kumenyu yokudonsela phansi.
Okwesikhombisa, kufanele uphawule ibhokisi ngaphambi kwesimemezelo sokuthi uyayamukela Imigomo Nemibandela yobhuki.
Okwesishiyagalombili, okumele ukwenze nje ukuchofoza inkinobho eluhlaza BHALISA ukuze uqedele ukubhalisa.
22BET UKUBHALISA NGE-E-mail
Ukucaciswa Okubalulekile kanye Nemithetho Yokubhaliswa Kwe-22Bet
– Kubalulekile ukuthi ufake ikheli le-imeyili lamanje njengoba lizosetshenziselwa ithimba losekelo ukuthi lixhumane nawe. Uma i-imeyili yakho ingeyakamuva, ngeke ukwazi ukuthola isixhumanisi sokuqinisekisa ukubhaliswa kwakho noma ukuthola izaziso, njengamabhonasi amanje noma azayo kanye nolunye ulwazi olubalulekile.
– Uma usuqedele inqubo yokubhalisa ephelele, iwindi lizovuleka lapho uzobona khona ikhodi enezinhlamvu ezingu-9. Leli igama lakho lomsebenzisi lesayithi. Uzobona nebhokisi lokufaka iphasiwedi yakho.
– Ngaphakathi 72 amahora, kufanele uqinisekise ukubhaliswa kwakho ngesixhumanisi ozosithola nge-imeyili.
– Ungabhala phansi ikhodi, okuyigama lakho lomsebenzisi lesayithi, kodwa futhi ungangena ku-akhawunti yakho ngekheli lakho le-imeyili.
– Ngemva kokubhalisa, udinga ukucacisa ukuthi iyiphi ibhonasi yokwamukela ofuna ukuyisebenzisa – okwesigaba Sezemidlalo noma isigaba seCasino, noma umemezele ukuthi awufuni ukusebenzisa noma yimaphi amabhonasi.
Ukuphepha Lapho Ubhalisa Futhi Usebenzisa Isizinda
Ifaka idatha yomuntu siqu, ukuthumela ikhophi yedokhumenti yokuqinisekisa nokusebenzisa izindlela zokukhokha ku-22Bet zivikelwe ngokugcwele. Ubhuki unikezwe ilayisense yiCuracao Gambling Authorities. Inombolo yelayisensi ithi 8048/JAZ. Ikhishwe ngoNovemba 16, 2018 futhi isebenza kuze kube uNovemba 28, 2023.
22Bet Ukubhalisa Ngefoni Ephathwayo
Uma ubhalisa ngenguqulo yeselula yesayithi noma ngezinhlelo zokusebenza, inqubo iyafana, ngokukhethwa kolunye lwezinhlobo ezimbili zokubhalisa.
– Inguqulo egcwele idinga nokuqinisekiswa kokubhaliswa ngesixhumanisi esingaphakathi 72 amahora.
– Uma ubhalisa ngeselula, ngeke ukwazi ukusebenzisa inguqulo yesiNgisi. Ifomu lokubhalisa lilayishwe ngesiNgisi.
22Bet UKUBHALISA NGOKUBHEJWA NGEFONI
22Bet Kwe-akhawunti Yokubheja
Ukuqinisekisa kuyinqubo esetshenziswa yibo bonke obhuki abaku-inthanethi ukuze kuqinisekiswe ubunikazi bamakhasimende. Esikhathini esithile ngemva kokubhalisa, uzocelwa ukuthi uqinisekise imininingwane yakho ngedokhumenti kamazisi. Nansi indlela inqubo esebenza ngayo.
Ngiqinisekisa Kanjani Kwa-22Bet?
Uma usudale i-akhawunti ngokubhalisa okuyimpumelelo, kufanele ugcwalise imininingwane ethile yomuntu siqu kuyo. Lokhu kuhlanganisa:
– uchungechunge lukamazisi wakho olwamukelwe ubhuki (Ikhadi le-ID noma ipasipoti);
– inombolo yakho kamazisi;
– yisiphi isifunda nendawo ohlala kuyo.
Ukuqinisekiswa ngedokhumenti kwenziwa ngemva kocingo oluvela kubhuki. Ithunyelwa ku-akhawunti kuwebhusayithi. Kufanele uthumele amakhophi askeniwe noma izithombe zemibhalo kamazisi wakho ukuze uqinisekise imininingwane yomuntu efakwe lapho kubhaliswa. Amakhophi noma izithombe zithunyelwa nge-imeyili.
Uma Uyalwa Ukuqinisekisa I-akhawunti Yakho Ye-22Bet, Kufanele Wenze Okulandelayo:
– Thumela ikhophi (scan noma isithombe) wedokhumenti kamazisi ethimbeni likabhuki
emibhalweni efana nekhadi likamazisi kufanele wenze amakhophi ezinhlangothi zombili zedokhumenti.
– 22Ukubheja ngokuvamile kudinga le nqubo ngaphambi kokunikeza isicelo sokuhoxa.
Ukuqinisekiswa Kokudluliswa Kwebhange
Lapho umsebenzi uzokwenziwa ngokudluliswa kwebhange, ubhuki unezidingo ezengeziwe ezilandelayo:
– Uma usebenzisa ikhadi lesikweletu, kufanele wenze amakhophi ezinhlangothi zombili zekhadi. Uhlangothi olungemuva kufanele lube nesiginesha yakho.
– Kufanele uthumele ikhophi yedokhumenti esemthethweni ebonisa ikheli lakho leposi uma ikheli lihlukile ekhelini lakho laphakade ku-ID yakho.
– Ubhuki angase adinge amanye amadokhumenti ngokubona kwakhe.
Ukuqinisekisa Ukuhoxiswa kwe-E-wallet
Ngalolu hlobo lokuhoxa, 22Ukubheja kungase kudinge imibhalo eyengeziwe uma inani lokwenziwe lidlula umkhawulo othile
Ukubhalisa kuwebhusayithi ye-22Bet kulula. Gcwalisa yonke imininingwane ngemva kokukhetha indlela yokubhalisa. Ukubhaliswa okugcwele kuyakhethwa, njengendlela enqamulelayo, ngenethiwekhi yokuxhumana nomphakathi noma isithunywa, ngeke ikusindise ekufakeni le mininingwane ngemva kwesikhashana.
Kubalulekile ukukhetha ibhonasi, kungaba eyesigaba sezemidlalo noma yekhasino, ngemuva kokubhalisa ukuze ukwazi ukusizakala ngamanani okukhuthaza. Gcwalisa imithetho ehlobene nokusetshenziswa kwamanani ebhonasi, kanye namabhonasi engeziwe akulindele, kanye nezinhlobonhlobo zemicimbi yezemidlalo nemidlalo yasekhasino, njengamakhasimende asebhalisiwe kabhuki.
Ingosi Yethu Ngezilimi Ezihlukene